Sei Judhasi akatengesa Jesu Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Nei Judhasi akatengesa Jesu. Ziva chikonzero nei Judhasi Iskarioti akatengesa Jesu ibasa rakaoma. Tinofanira kuziva kuti mubhaibheri mune ndima shoma dzinotaura nezvehunhu, uye mashoma aripo, anotaura nezvake sembavha uye mutengesi. Kunyangwe izvi, Jesu akamusarudza semumwe wevanegumi nevaviri kuti vaizogashira dzidziso yavo pachezvayo, nechinangwa chekuve mutungamiri wenguva yemberi weChechi.
Nekudaro, zviripo dzidziso dzakasiyana siyana chii chinogona kuvhenekera zvishoma kuna Judhasi uye kuti tiite kuti tinzwisise sei akatengesa mudzidzisi wake. Asi zvisati zvaitika, tinofanira kuziva kuti Judhasi aive ani uye nezvaakaita.
1 Ndiani ainzi Judhasi Iskarioti
2 Judhasi Akatengesa Sei Jesu
3 Nei Judhasi akatengesa Jesu: dzidziso dzakasiyana
3.1 1. Kuodzwa mwoyo kwaJudhasi
3.2 2. Hunhu hwaJudhasi
3.3 3. Sei Judhasi Akatengesa Jesu: Chirongwa Chamwari
Ndiani ainzi Judhasi Iskarioti
Chinhu chega chatinoziva nezvaJudhasi chinowanikwa muEvhangeri. Kutenda kwavari, isu tinoziva izvozvo Aive mwanakomana wemurume ainzi Simoni uye izvozvo Ini ndaive ndatarisira mari yeboka, asi aive netsika yeku kuba chikamu cheunganidzwa.
Kukudzwa kwake kunowedzera apo tinoswedera kumazuva ekupedzisira ehupenyu hwaMesiya, sezvo Judhasi ari iye akatungamira zviremera kuGomo reMiorivhi kuti vasunge Jesu.
Judhasi Akatengesa Sei Jesu
Evhangeri dzinorondedzera kuti vatungamiriri vezvitendero vechiJuda vaitsvaga nzira yekusunga nekuuraya Jesu, asi vasina kumutsa mhomho. Naizvozvo, vakabhadhara Judhasi makumi matatu emari yesirivha kufumura "mutambudzi" kumauto eRoma.
When Judhasi akaziva zvaakaita, ndakademba kwazvo uye akatsvaga vatungamiriri vezvitendero kuti vadzorere mari yavainge vamupa. Zvakadaro, Nguva dzainge dzatononoka. Judhasi akapedzisa kutengesa kwake. Nguva pfupi yapfuura akatora hupenyu hwake.
Nei Judhasi akatengesa Jesu: dzidziso dzakasiyana
Bhaibheri ibhuku rine nhamba huru kwazvo dzenyaya. Dzimwe dzadzo dzakabatana chaizvo uye vamwe vanoshandisa mutauro wekunyora zvinoenderana nenguva. Neichi chikonzero, pane zvinopesana muzvinhu zvakawanda. Pasina kuenda kumberi, ivo varipo dzidziso dzakasiyana siyana kutsanangura kuti sei Judhasi akatengesa Jesu. Zvisinei, chero ipi iri yechokwadi kwazvo, ese akakodzera kuongororwa.
1. Kuodzwa mwoyo kwaJudhasi
Imwe yedzidziso dzakawana simba zvakanyanya dzinovakirwa pachokwadi chekuti mwanakomana waSimon akaodzwa mwoyo muna Jesu. Zvinogoneka kuti Judhasi mirira Mesiya akaziviswa saMambo, achatungamira musangano wezvematongerwo enyika rusununguko kuburikidza nechisimba kurwisana nevakuru vemunharaunda. Kunyange zvakadaro, iyo pacifist meseji inogona kunge isina kuve yakanyanyisa kufarirwa.
2. Hunhu hwaJudhasi
Dzimwe dzidziso dzakavakirwa pahunhu hwaJudhasi. Sezvatataura pamusoro, Akanga ari murevi wenhema, ane udyire, mbavha uye mutengesi. Naizvozvo, nKana zvingave zvisinganzwisisike kana akatengesa mudzidzisi wake neimwe mari. Paakaona chete kuti Jesu aiziva zvirongwa zvake, ndipo paakazogona kunzwisisa kuti Jesu aimuda kupfuura zvimwe zvese. Ndipo paive nehana yake yaimutungamira kuti azviuraye.
3. Nei Judhasi akatengesa Jesu: Hurongwa hwamwari
Pane dzidziso iyo isiri yemavhangeri echinyorwa. Nekudaro, yakawana kukwezva kukuru kuburikidza nekuwanikwa kwevhangeri nyowani yekufananidza inonzi iyo Evhangeri yaJudhasi.
Iyi dzidziso nyowani inotaura kuti Judhasi aive akafanana nemusoja aiteedzera zvakarairwa nemutungamiriri wake uye uyo, mushure mekuita kutengesa, akarairwa kuti afe hupenyu hwake. Naizvozvo, akanga asiri mutengesi asi mufiri kuti akazadzisa zvirongwa zvaMwari.
Chero chingave chikonzero che nekuti Judhasi akatengesa Jesu, chinhu chakakosha pamusoro penyaya iyi kuziva icho Jesu aiziva nezvekutengeswa uku. Izvi zvinotiratidza izvozvo Jesu akauya pano pasi aine chirongwa chakatosimbiswa uye kuti rudo rwake chii infinito.
Chero ani zvake aisazorega mutengesi achienda naye uye angangomushora asati apedza kunyengera kwake. Zvakadaro, Rudo rwaJesu kuna Judhasi rwaive rwakakura zvekuti haruna kumbomutadzisa kuzadzisa ramangwana rake.
Izvi ndizvo zvazviri! Isu tinovimba ichi chinyorwa chinokubatsira iwe kunzwisisa chikonzero che nekuti Judhasi akatengesa Jesu. Kana ikozvino iwe uchida kuziva sei Jesu akatuka muonde, ramba uchivhura Ziva.online.
Nei Sodhoma neGomora zvakaparadzwa?